Hiran State - News: Puntland oo ay ku sii qulqulayaan dhalinyaro bistoolado wata.
Puntland oo ay ku sii qulqulayaan dhalinyaro bistoolado wata.
Puntland:- Tan iyo markii ay maamulka Puntland bilaabeen amaba codsadeen iney marti galiyaan shirka loogu magac daray wadatashiga waxaa jiray dhalinyaro sida la sheegay iskugu jira kuwo u dhashay degaanka Puntland laakinse ku barbaaray Koofurta Somaliya iyo dhalinyo ka soo jeeda Mogdisho iyo degaano ka mid ah gobolada dhexe oo ku hubeysan bistoolado iney gaareen magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedka Puntland iyagoo isku qeybiyey magaalooyinka Bosaaso, Galgacyo iyo waliba Caasimada dowlad goboleedka Puntland.
Dhalinyaradaan ayaa dhawaanahanba halkaasi sahan ka waday iyagoo intooda badan isku egeysiiya ganacsato yar yar, halka qaarkoodna lagu sheegay iney degaanadaasi ku galaan qaab u muuqaal eg culimada tabliiqa oo ay koox koox u socdaan xiliyada habeenkii.
Dhalinyaradaan ayaa halkaasi u tagay labo arimood.
1- Iney carqaladeeyaan nabadgalyada ka jirta degaanadaasi si aduunyada loo tusiyo ineysan Puntland aheyn meel nabdoon waliba weerarada ugu badan ayaa la qorsheynayaan iney dhacaan ka hor mudada uu Mahiga iclaamiyey shirka. Arintan waxaa siweyn ugu lug leh masuuliyiinta TFGda qaarkood oo iyagu aad uga xun in Garoowe ay caasimada Somaliya kula tartanto shirka la shegay waaba hadii uu dhacee.
2-Qodobkan walito waa naga qabyo marka aanu warbixinta oo dhameystiran helno ayaanu soo bandhigi doonaa waa mid aad xasaasi u ah waayo xaafad ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalda gaalkacyo ayey dhalinyaradaan iska soo abaabulaan marka magaca xaafada iyo goobaha ay ka dagan yahiin ayaanu soo bandhigi doonaa dhawantan marka ay warbixinta noo soo gabo gabowdo.
Marka ay dhaliyaro hubeysan tagaan magaalo nabdoon inta badan waxey ugaarsadaan dad loo soo tilmaamay mana ahan Puntland oo kaliya goobaha ay ka howl galeen dhalinyaradaani oo sanadkii 2009-kii ayey sidan oo kale 50 dhalinyaro ah oo ka amar qaadanayey xizbul Islaamkii bur buray u tageen Hiiraan gaar ahaan magalada Belet Weyn iyagoo halkaasi ku dilay waxgarad iskugu jiray saraakiil, dhaqaatiir, aqoonyahano, nabadoono si weyn looga yaqaanay bulshada reer Hiiraan.
Shacabka Somaliyeed iyaga ayaa isku muuqda laakinse inta badan waxaa isku dira amaba ay dad kaka dhintaan marka ay shir iclaamiyaan wadamada Somaliya faragelinta ku haya iyo UN-ka iyadoo kooxkasta ay markaasi isku dayeyso iney carqaladeyso goobaha nabdoon.
hadaba la soco wararkeena danbe iyo arinta dhalinyaradaan Puntland ku sii qulqulaya.
· admin on August 28 2011 01:51:48 · 0 Comments · 1933 Reads ·
14,569,724 unique visits